सरकार लाचार भए डा. केसीलाई जे पनि हुनसक्छ : सुवेदी « Ok Janata Newsportal
सरकार लाचार भए डा. केसीलाई जे पनि हुनसक्छ : सुवेदी
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आएका डा. गोविन्द केसी अनसन बसेको शनिबार २७ औँ दिन पुगेको छ । जुम्लाको बाबरी मष्टा मन्दिरबाट अनसन थालेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था पनि नाजुक बन्दै गएको छ ।
सरकार र डा. केसीबीच वार्ता गर्ने तयारी भएपनि हुन सकेको छैन । शुक्रबार हुने भनिएको वार्ता पनि सरकारले चाँसो नदेखाउँदा सम्भव भएन । डा. केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीका अनुसार शुक्रबार वार्ताका लागि कुनै ठोस पहल भएको थिएन । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार झुट रहेको ओकेजनतालाई सुवेदीले बताए ।
सुवेदीले भने– ‘सरकारले डा. गोविन्द केसीलाई गलाउने, मार्नेसम्मका योजना बुनिरहेको बाहिरिएको छ यसको हामी घोर निन्दा गर्छौ ।’ ‘शनिबार १२ बजे माइतीघरमण्डलमा सबै चिकित्सक वा अन्य चासो राख्ने सहयोगी व्यक्तिलाई उपस्थितिका लागि आग्रह गर्दछौँ ।’
सरकारले वार्ता टोली गठन गरेर नाटक मञ्चन गरिरहेको सुवेदीको आरोप छ ।
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गइरहेको छ । अबको केही दिनभित्र वार्ता भएन भने जे पनि हुनसक्छ ।
डा गोविन्द केसीको १९औं सत्याग्रहको आज २७औं दिन भइसकेको छ र डा केसीको स्वास्थ्य असाध्य नाजुक भइसकेको छ । यसबीच नेपाल सरकार र डा केसी तर्फको वार्ता टोलीबीच दुई दिनसम्म वार्ता भइसकेको छ । त्यस क्रममा सरकारी वार्ता टोलीले चिकित्सा शिक्षा आयोग, विभिन्न प्रतिष्ठानहरु, मन्त्रालयहरुलगायतका पदधिकारीहरुसित व्यापक छलफल, परामर्श र गृहकार्य गरेको थियो । दुवै पक्षको गम्भीर गृहकार्य र छलफलपछि असोज २२ गते साँझ डा केसीले राख्नुभएका मागहरु सम्बन्धमा बुँदागत समझदारीको मस्यौदा बनेको थियो । तर असोज २३ गते राज्यको राजनीतिक नेतृत्व पक्षले उक्त समmभदारीबाट पछि हट्दै प्रक्रियागत कुरामा मात्र नभई सारभुत विषयमा फरक कुरा समेट्न प्रयास गर्यो । त्यस क्रममा अनौपचारिक पहलमार्फत डा केसी केही बुँदामा थप लचिलो समेत हुनुभयो र सरकार पक्षले वार्ता समझदारीमा टुंगिने आश्वासन दियो । तर असोज २३ गते दिनभर सरकारी पक्षले आलटाल गरेर वार्तामा ढिलाइ गर्यो । साँझ ढिलो गरी भएको वार्तामा सरकारी पक्ष २२ गते बनेको मस्यौदामा गम्भीर हेरफेरसहितको नयाँ मस्यौदा लिएर प्रस्तुत भयो । यसबाट राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी र संवेदनहीनता मात्र नभई बेइमानी र वार्ता प्रक्रियालाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याएर डा केसीको ज्यानै लिने नियत समेत उदांगो भयो । त्यसैले डा केसीको स्वास्थ्यमा जोखिम बढेर जटिलता आइ ज्यानै जान सक्न सम्भावना रहेकाले तत्काल असोज २२ गतेका समझदारीलाई औपचारिकता दिंदै त्यसको कार्यान्व्यन सुनिश्चितताका लागि मन्त्री परिषद्बाट पारित गर्न सरकारसामू जोडदार माग गर्दर्छौं । त्यसका लागि दबाब दिन देशभर प्रदर्शनका कार्यक्रम सुचारु गर्न तथा काठमाडौंमा आज मध्यान्ह १२ बजे प्रदर्शनका लागि माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हुन सबै नागरिकलाई अपिल गर्दर्छौं । साथै सत्याग्रहीको ज्यानै लिने सरकारको हिंस्रक चरित्रविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्दै नेपालमा लोकतन्त्रको मर्म बचाउन राजनीतिक दलहरुलाई समेत अपिल गर्दर्छौं । डा जीवन क्षेत्री, संयोजक डा गोविन्द केसीको तर्फबाट गठित वार्ता टोली